Ny lalan'ny fiovam-po | Martech Zone
Ny lalan'ny fiovam-po
Alatsinainy, Jolay 30, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Misy dingana iray amin'ny fampiharana paikady marketing miditra, fitsapana an'io paikady io ary fanatsarana izany paikady izany. Mampalahelo fa orinasa maro no tsy mametraka paikady feno alohan'ny handaozana azy ary hiverina amin'ny dolara avo, ezaka amin'ny varotra ambany. Ny paikady an-tserasera tsara dia mila paikady mitohy mba hahitana valiny farany ambony.
Ny làlana izay mitondra mankany amin'ny fiovam-po dia matetika toa tsy tratran'ny mpivarotra. Na ny famoronana traikefa mahaliana, mifantoka amin'ny fiovam-po na fanatanterahana tetikady fitsapana misy fiatraikany - sarotra ny fananana tondrozotra pejy fandraisana mahomby - mandraka ankehitriny.
Ion Interactive vaovao farany mamaritra ny lalana mankany amin'ny fiovam-po manomboka amin'ny fanombohan'ny marika voalohany mankany amin'ny paikady aorian'ny fanovana
Janrain: sambory ary manatanjaha ny fanatrehanao ara-tsosialy